Ukuzimela ngaphakathi kwindlu yabucala yelizwe
I-architectural eyilwe njengekhaya langoku kunye nokubonakaliswa kwesithethe sendlu yelizwe. Uyakonwabela intuthuzelo ebanzi kwindawo yabucala yakho ekuvumela ukuba ube ngaphezulu kwemigangatho emibini. Ikhitshi / igumbi lokutyela elikhulu elikhethekileyo yindawo entle yokuhlala ngalo naliphi na ixesha nokufikelela kwiindawo zayo zabucala ezingaphandle, okanye kwigumbi lokuhlala elipholileyo kodwa elikhulu ngokuhlwa.
Indawo yokuhlala iqulethwe ngaphakathi kwindlu yelizwe eyohluliweyo yangoku enenkululeko epheleleyo yabucala kunye nokufikelela. Ikhaya lakho libekwe ngaphezulu kwemigangatho emi-2 kunye neholo esembindini ekhokelela ekhitshini, kwindawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala elinegumbi lokuhlambela elisezantsi. Umgangatho wokuqala unendawo enkulu yokuhlala / indawo yokuphumla, ukufikelela kumagumbi okulala amabini amakhulu kunye negumbi lokuhlambela elikhulu ekwabelwana ngalo phakathi kwamagumbi omabini.
Indawo yokupaka iimoto yabucala ingasemva kwepropathi enendawo yokuhlala yabucala engaphandle, kunye nesango lakho eliphambili kwikhaya lakho.
Indlu ipholile kakhulu ngokufudumeza okuphakathi, amanzi ashushu kunye nendawo yomlilo evulekileyo kwigumbi lokuhlala njengento eyongeziweyo.
Ndihlala kwipropathi edibeneyo kwaye ndifumaneka lula ukukunceda kuyo nayiphi na imibuzo kunye nolwazi lwasekhaya.
Ibekwe kumgama omfutshane ngaphandle kwelali eyimbali yasequin, ukwindawo ezolileyo yoxolo kungaphelanga nemizuzu engama-20 yeSikhululo seenqwelomoya saseShannon. Iziko ledolophu yase-Ennis, idolophu enkulu exakekileyo yedolophu ingaphakathi kwemizuzu eli-10 kuphela ngemoto. Indawo yalapha idume ngokukhwela amahashe, ukuloba echibini kunye nokuhamba ngeenyawo. Inqaba yaseBunratty kunye neKnappogue zizibheno zasekhaya ezibamba utyelelo kunye nezidlo zamandulo.
Ndifumaneka ngokutsalela umnxeba kulo naluphi na uncedo olungaphaya xa lufuneka.